एक डोज मात्र लगाए पुग्ने १५ लाख डोज अमेरिकाको खोप नेपाल आइपुग्यो,अब कसले पाउँछन् यो खोप ? – Sapana Sanjal
July 12, 2021 175
Sapana Sanjal : काठमाडौं- अमेरिकी सरकारले कोभ्याक्सअन्तर्गत उपलब्ध गराएको खोप नेपाल आइपुगेको छ। अमेरिकाले उपलब्ध गराएको १५ लाख डोज खोप लिएर कतार एयरको जहाज सोमबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो।
खोप लिनका लागि स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विमानस्थल पुगेका थिए। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले मन्त्री श्रेष्ठलाई खोप हस्तान्तरण गरेका छन्।
एक डोज लगाए पुग्ने सो खोप झन्डै १५ लाख मानिसलाई पुग्ने छ। तर उक्त खोप क-कसलाई लगाउने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। सोको निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने भनिए पनि खोप कसले पाउने भनेर अझै टुंगो भइनसकेकोछैन। खोपका लागि धेरैको निवेदन आएको छ। तर पहिलो प्राथमिकताचाहिँ उमेर समूह नै छ।
Prev१५ दिनदेखि हराएकी विनाले बनाएको टिकटक भिडियो बाहिरियो , किन तिमीले मेरो चित्त दुखायौ ? भन्दै टिकटकमा पीडा पोखेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो
Nextटु,क्रा–टु,क्रा पारी सिमेन्टले प्लास्टर गरिएकाे सुजिताको श’व शौचालयको ट्याङ्की भित्र भेटियो